माधव नेपालले स्टेजबाटै झपारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई, अव के गर्लान ओलीले ? — Motivatenews.Com
माधव नेपालले स्टेजबाटै झपारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई, अव के गर्लान ओलीले ?
काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्टेजबाटै झपारेका छन । ओलील ेदुई तिहाईको दम्भ नदेखाउन खोजेको भन्दै उनले झपारेका हुन ।
अहिले पनि धेरै जनताको विश्वास जित्न बाँकी रहेकाले दुइतिहाइको दम्भ नदेखाउन आग्रह गरेका छन । युवा संघ नेपालको २९ औ बार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेता नेपालले भने, हामीले ५५ प्रतिशत जनताको मत प्राप्त गरेका छौं, ख्याल गर्नुहोस् दुई तिहाई होइन ।’
कम्युनिष्ट नेताहरुको आचरण र व्यवहार परीक्षणमा रहेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले युवा नेताहरुलाई सचेत समेत गराएका छन् । ‘हाम्रो आचरण र व्यवहारमा कतै ठुला समस्या त खडा भएका छैनन् ? अनौठो खालका विकृतिहरु झांगिएका त छैनन् ? पारदर्शीता छ कि छैन ? कमिटीभित्र सबै कुराहरु छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? कामको बाँडफाँड गरिन्छ कि गरिँदैन ? योग्यता क्षमताको मुल्यांकन गरिन्छ कि गरिँदैन ? जम्मै कुराहरुलाई हेर्नुहोस्’ उनले भने, ‘किनभने अन्त्यमा तपाईको व्यवहारले नै मान्छेको मन जित्छ ।’